Ukulungiselela uHlahlo-lwabiwo mali lokuQala ngoQeqesho - Okunye
Organic Ukulima Ne Gadi
Ukulungiselela uHlahlo-lwabiwo mali lokuQala ngoQeqesho
Nje ukuba wenze isicwangciso seshishini kwindawo yakho entsha yokhathalelo, kubalulekile ukubala iindleko zokuqalisa ezifunekayo ukuvula ishishini. Uhlahlo-lwabiwo mali luyakwenza ukuba inkqubo ibe lula.
Isikhokelo samanyathelo ngamanyathelo
Ukulungiselela uhlahlo-lwabiwo mali lokuqalisa ukhathalelo lwenkqubo kunokuba yinkqubo enzima kakhulu ukuba awuqinisekanga ukuba ungaqala phi kwaye ziziphi izinto ekufuneka uziqwalasele ukuze zibandakanywe. Olu luhlu lulandelayo kunye nespredishithi esihambelanayo siya kuququzelela inkqubo, yenze kube lula kuwe ukuba wenze uluhlu lwenkcitho eqikelelweyo.
UMichael kors ibhegi yenombolo yokujonga
Izimvo zemali zokuQalisa ishishini
Izinto eziSisiseko zeOfisi yeShishini
Inkcubeko yaseJapan yoShishino
Cofa ukuze ukhuphele isampulu yonakekelo lwemini yokuqalisa uhlahlo-lwabiwo mali.
Ukufikelela kwispredishithi, cofa nje kumfanekiso. Iindidi kunye nezinto ezihambelanayo zinokongezwa okanye zikhutshwe kwi-spreadsheet ukuze zilungele iimfuno zakho.
Njengoko usebenza kwicandelo ngalinye lefom yebhajethi, igalelo lenkcitho eqikelelweyo kwiseli nganye kwiinyanga ezili-12 zokuqala. Iitotali ziya kubalwa ngokuzenzekelayo ngokwento, icandelo, kunye nenyanga, eziya kuthi ziququzelele iinzame zohlahlo-lwabiwo mali kwaye zincede zichonge iindawo apho iindleko eziqikelelweyo zigqithile kwaye zifuna ukulungiswa.
Ngaphambi kokuvula iingcango zakho zeshishini, kuyakufuneka ufumane ilayisensi efanelekileyo kunye neemvume (ukuba kufanelekile) ngokusebenzisa unobhala wenkundla kwindawo osebenza kuyo. Nje ukuba oku kuthathelwe ingqalelo, qiniseka ukuba ubhalisa kwisebe lakho likarhulumente lwengeniso kwaye ukhusele iNombolo yokuZazisa yoMqeshi. Inombolo yomanyano isimahla, kodwa uya kungena kwiindleko zamaphepha-mvume, iimvume kunye nobhaliso lwaseburhulumenteni.
Imirhumo yoMthetho kunye ne-Akhawuntingi
Thenga igqwetha lendawo elinokuthelekisa izivumelwano oya kuthi uzinike abasebenzi kunye nabo baxhasa iinkonzo zononophelo lwasemini. Ukufumana kwakhona uqikelelo lweentlawulo zomthetho ezifunekayo.
Kuya kufuneka ubandakanye uqikelelo kugcino lweencwadi okanye isoftware yobalo ukuze urekhode kwaye ulawule iimali zeziko.
Fumana iarhente yokuthengisa izindlu nomhlaba eyaziwayo kunye nelayisensi yokukunceda uchonge izibonelelo ezinokubakho. Faka ixabiso eliqhelekileyo lenyanga lokhetho oluphezulu kuhlahlo-lwabiwo mali. Ngaphambi kokwenza uphando, qinisekisa ukuba imeko yakho yokusebenza inezona mfuno zisezantsi zomntwana ngamnye njengoko oku kunokuba nefuthe elibonakalayo kukhetho olunokubakho.
Kwakhona, jonga naluphi na uhlengahlengiso olunokufuna isakhiwo ukuze sihlale sihambisana nemigaqo karhulumente.
ileta yengcebiso yetemplate yomfundi
Nje ukuba isakhiwo sisebenze, iindleko zoncedo ziya kubakho. Oku kubandakanya umbane, amanzi, umnxeba kunye nokususwa kwenkunkuma. Nxibelelana nenkampani yendawo yakho ukuze ufumane umyinge kumzi-mveliso.
Uya kudinga ukuthenga i-inshurensi yamatyala ukukhusela iimeko ezingathandekiyo, ezinjengokwenzakala kwakho kunye nokonakaliswa kwepropathi, okunokwenzeka kwindawo leyo. Ukuqinisekisa ukogquma oloneleyo olwaneleyo, cinga ukuphatha i-inshurensi yobusela neyomlilo.
Ukufumana uluhlu lwee-arhente zeinshurensi ezibonelela ngolu hlobo lokugubungela, nxibelelana nomboneleli wakho wasekhaya okanye usebenzise izixhobo zokukhangela kwi-Intanethi ezinikezwe Iingcali zeinshurensi yokuKhathalela abantwana okanye Ukuqinisekisa ukhathalelo lomntwana .
ubude obuqhelekileyo bobudlelwane ngokweminyaka
Inani labasebenzi ekuya kufuneka ukuba ubaqeshe lixhomekeke ekubeni bangaphi abantwana oceba ukubhalisa. Xa uqikelela inkcitho yomvuzo, qiniseka ukuba uthathele ingqalelo umvuzo omncinci womdibaniso kunye nomndilili wecandelo. Ikwangumbandela woKhuseleko lweNtlalo kunye neirhafu zeMedare. Ndwendwela Iwebhusayithi ye-NAEYC ukufunda okungakumbi malunga nomyinge ogunyazisiweyo katitshala-ukuya-kumfundi.
Izixhobo kunye nezixhobo
Uya kudinga ukuqikelela iindleko ezinxulumene nokunikezela indawo yokugcina abantwana ngokungqinelana nemigangatho ethile. Izinto ezifunekayo ziya kwahluka ngokuxhomekeke kubudala babantwana kunye nobungakanani beziko. Ezi zinto zibandakanya:
Iifenitshala (ezinje ngeebhedi, iitafile kunye nezitulo ezincinci)
Izixhobo zokhuselo (amasango, oonogada abaphuma ngaphandle)
Izixhobo zemfuno ezizodwa
Ukufundisa iithoyi kunye nokubonelela
Inqaku kwiindleko zokutya kubo bonke ababhalisile. Njengesikhokelo, ungasebenzisa i- Ukutya okuqhelekileyo kunye namaxabiso esibonelelo sokutya ibonelelwe yi-IRS.
Kuya kufuneka uqeshe unobhala oza kubeka iliso kwimisebenzi yemihla ngemihla yeziko lokugcina abantwana, njengeefowuni, ii-imeyile, ifeksi, iiakhawunti ezifumanekayo, ukuhlawulwa kwetyala kunye noku-odolwa. Iikhompyuter zeOfisi kunye nezinto ngokubanzi ziya kufuneka nazo.
Ukuze usasaze igama malunga nendawo entsha yokhathalelo, kufuneka iphulo lokuthengisa. Ukuthetha ngomlomo kunye namajelo asekuhlaleni yenye yeendlela zokufezekisa le njongo, kodwa imali kufuneka yabelwe izinto ezinje ngentengiso yamaphephandaba, amakhadi oshishino, iincwadana, iiflaya, iindawo zokuqeshisa iminyhadala yasekuhlaleni kunye neminyhadala, iimagnethi zemoto kunye neempawu zeyadi. Shicilela umbono kwaye Iiklabhu zeeklabhu bonelela ngezisombululo zokushicilela ngexabiso eliphantsi kumashishini.
Ezinye iindleko zokusebenza
Kububulumko ukwahlula imali kwiindleko eziguqukayo, kubandakanya ikontraki, ukubonisana kunye nokuqhubeka kwemali yokufunda.
Ezinye iingcebiso eziluncedo
Ukuqala ukhathalelo lwemini ayingomsebenzi ungabizi mali ininzi, kodwa ngocwangciso olufanelekileyo kunokwenzeka ukuba ufikelele kwinqanaba elinqwenelekayo lempumelelo. Kungcono ukusebenzisa amanani alondolozayo xa ugcwalisa itemplate ukuqinisekisa ukuba unemali eyaneleyo yokusebenza ukuze usebenze ngokukhululekileyo kwaye ngaphandle kwezithintelo zemali.
Ubucwebe Begolide Iingxaki Zokukhulelwa Imbali Yedance Inja Izilwanyana Imifanekiso Yepati
Ikhaya Umthengi Ukuhlola
Ukuthintela Umlilo Nokukhusela
Ukujamelana With Grief
indlela yokubhala intetho yokwamkela
Kutheni inja yam inuka nje umsi
iindlela ezintle zokubuza intombi yakho ukuba igoduke
ukulahleka kombongo othandekayo
indlela ulwimi ukwanga isoka lakho
izipho zabantu abadala kumakhaya abalupheleyo
Ukuhombisa I Icandles